Yuhuudda oo foodda gelin wayday hawada Suuriya tan iyo markii ay heshay gantaalaha S-300 | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Yuhuudda oo foodda gelin wayday hawada Suuriya tan iyo markii ay heshay...
Yuhuudda oo foodda gelin wayday hawada Suuriya tan iyo markii ay heshay gantaalaha S-300
(Tel Aviv) 10 Nof 2018 – Ciidamada Cirka Yuhuudda ayaa la xaqiijiyay inaysan hal weerar cireed ka gaysanin dalka Suuriya tan iyo markii uu Ruushanku siiyay gantaalaha S-300, iyagoo ka baqaya in lasoo rido.
Ciidamada Cirka Yuhuudda oo weerarro joogto ah ku hayay dalkaa Suuriya ayaan hal weerar qaadin tan iyo 17-kii Sebtember, markaasoo ahayd goortii ay sabab u noqdeen inay dhacdo dayuurad nooca basaaska ah oo ay leeyihiin Ruushka oo ah Il-20 taasoo ay dayuurad Yuhuuddu leedahay ay uga gabatay gantaal ahaa Saam S-200 ah oo ay soo rideen ciidamada Suuriya.
Ruushka oo tillaabadaa aad uga caroodey kaddib markii uu raadeerkiisa ku ogaadey sida ay wax u dheceen, wuxuu markiiba Suuriya ku wareejiyay gantaalaha S-300 oo uu Yuhuudda darteed ugu diiddanaa markii horeba, sida ku qoran warsidaha Jarmanka ah ee Contra Magazine.
Maraykanka oo ballan qaaday inuu Israel ku hubaynayo F-35 dheeraad ah isagoo ka dabaaqaya Ruushka oo S-300 siiyay Suuriya
Maamulka Tel-Aviv ayaan sidoo kale si wanaagsan ula shaqayn Ruushka iyagoo weerradooda daqiiqadda ugu dambeeysa ogaysiinayay ciidamada Ruushka waxayna sabab ka dhigteen inuu Ruushku sii wargelinayo ciidamada Suuriya iyo malliishiyaad Iiraan taageersan oo meesha jooga.
Si kastaba, Wasiirka Gaashaandhigga Yuhuudda ee xagjirka ah ee Avigdor Lieberman ayaa hoosta ka xarriiqay arrintan isagoo yiri: “Ma aqbali doonno in la xadido madax banaanida howlgalladeena.”
Previous articleDAAWO: Dab la xakamayn la’yahay oo galaaftay guryaha jilayaasha & fanaaniinta Maraykanka + Sawirro
Next article”Warka Macron waa GEF wayn!” – Trump oo weerarka ku qaaday aragtida inay Yurub dhisato ciidamo u gaar ah!